[Eng Sub] เพราะเราคู่กัน 2gether The Series | EP.1 [1/4] - MY - Stindx.com
Number of symbols: 7576
ယခု အစီအစဉ်သည် အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် အထက်သာ ကြည့်ရှုရန်သင့်တော်ပါသည်။ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် ကြည့်ရှုသူများ အနေဖြင့် မိဘ အုပ်ထိန်းသူ ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ကြည့်ရှုသင့်သည်။ လောကကြီးမှာ ဘာလို့အားလုံးက အတွဲလိုက်ရှိနေတာ ဆိုတာ ကို မင်းသတိထားမိလား? သူငယ်ချင်း လို ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူ ရည်းစားတို့လိုပေါ့ အထူးသဖြင့် မင်း နဲ့ တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ လူကို ရှာတွေ့တဲ့ အခါ အဲ့လူနဲ့အတူရှိဖို့မင်းဘာမဆိုလုပ်မိမှာပဲ ငါက တော့ မိန်းကလေး‌တော်တော်များများနဲ့ တွဲခဲ့ဖူးတယ်။ Ging ပြီးရင် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမယ်လေ ဒါပြီးရင်သင်္ချာအချိန်ပို တက်ရဦးမယ် မနက်ဖြန်ဆိုရင်ကော? မနက်ဖြန်? Bio အတန်းရှိတယ်။ သန်ဘက်ခါ ဆိုရင်ကော? Physics, Chemistry, လူမှုရေးသိပ္ပံ, အင်္ဂလိပ်စာ ပြီးရင် သင်္ချာ ပြန်တက်ရဦ်းမှာ။ လိုင်ချီး လို့ ပြော........ ပုံထဲမှာ ငါဝနေတယ်. ပြန်ရိုက်ရအောင် ချယ်ရီ ချယ်ရီ ပြီးပြီမလား စားကြမယ် နေဦး။ ဆယ်ဖီ ထပ်ဆွဲ ရအောင်လို့။
ဆယ်ဖီ? စတော်ဘယ်ရီ ရှင်းပဲရှင်းလိုက်တော့ စားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး Bae ဘာစားချင်လဲ Noomnimကောဘာစားချင်လဲ ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ် ရေခဲမုန့်? ဝလိမ့်မယ် Honey toast? ချိုလွန်းအားကြီးတယ် pudding? bingsoo? Choux Cream? ရိုးနေပြီ ဒါဆို Noomnim ဘာစားချင်တာလဲ ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ် Namwan ကို့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာလား မဆိုးပါဘူး "မဆိုးဘူး" ဆိုတာကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိရင် တောင်းပန်တယ်နော် ဘာလို့တောင်းပန်နေတာလဲ စိတ်မဆိုးပါဘူးဆို စိတ်မဆိုးဘူးဟဲ့ ဒါဆို ဘာလို့... တစ်ယောက်မှကျွန်တော့အတွက်မသင့်တော်ခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် တစ်ယောက်လောက်ရှာဖို့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာတာပဲ ဒီတခေါက်က အဲ့လောက်ထိကွာခြားနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားမိဘူး
[Tine:cheerleader audition ကတော့ပြီးပြီ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်လူတော့မ ေတွ့သေးဘူး] [လွန်ခဲ့သော၂ပတ်ခန့်က] ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေလား မင်းနဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးထားတာပဲ ကွက်တိပါပဲ P'Fang ကောင်းတယ် P' နဲ့ student code တူတူပဲနော် ဟုတ်
ဘာလို့cheerleader ဖြစ်ချင်တာလဲ အတွေ့အကြုံအသစ်ရအောင်ပါ...ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းအသစ်‌လည်းရအောင် ကောင်းတာပေါ့ ဒါနဲ့ မင်းကို တစ်ယောက်ကဒီစာပေးလိုက်တယ် အံမယ် ပွဲဦးတောင်မထွက်ရသေးဘူး နာမည်ကြီးနေပြီပေါ့ ဟာ...P'ကလည်း ကျွန်တော်ဒါတွေစိတ်မဝင်စားပါဘူး ကျွန်တော်က စာနဲ့ကျောင်းကိစ္စတွေပဲအာရုံစိုက်တာပါ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ် နောက်တပတ်ရောက်ရင်ကျောင်းသားတွေစုပြီးစားကြမှာ အဲ့‌ေတာ့မှတွေ့ကြမယ် ဖွင့်လိုက်ပြီနော် Tine , ဒို့မင်းကိုFresher welcomeထဲကကြည့်နေတာ ဒို့ပြောစရာရှိတယ် ဘောလုံးကွင်းမှာလာတွေ့နော် ပြောချင်တာပြောလို့ရပြီ အချိန်သိပ်မရဘူး ငါ့ကိုပြောနေတာလား အင်းလေ ဒီစာကိုမင်းရေးတာမဟုတ်ဘူးလား ရူးနေလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို Nadech လို့ထင်နေတာလား အရူးကောင်! ဒို့ရေးထားတာ ဒို့နာမည်က Green ဒို့ကလူမှုရေးသိပ္ပံက ပထမနှစ်ကျောင်းသား
ကျေးဇူးပါဗျ Tine Teepakorn Law က‌ကျောင်းသားလေး မင်းကိုဒို့ကြိုက်တယ်! ဘာ... နောက်ဆုံးတော့ မင်းဖူးစာကိုတွေ့ပြီပေါ့ သေချင်လို့လား Fong မက်းကအခြောက်တွေကိုမုန်းလို့လား မဟုတ်ပါဘူး ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ gayတွေလည်းပါပါတယ် အဲ့ဒါကငါသူတို့နဲ့တွဲမယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာ ဒါဆိုလည်းသူ့ကိုသေချာပြောလိုက်လေ ပြောပြီးပြီ ငါမိန်းကလေးတွေပဲကြိုက်တယ်လို့ အထပ်ထပ်အခါခါပြောတာပဲ အဲ့ဒါကို သူကငါစိတ်ပြောင်းလာအောင်လုပ်မယ်တဲ့ ဟာ! အတည်‌ေပါက်ကြီးပဲ Team Greenမှာဘယ်သူတွေပါမလဲ ငါ.. ငါ.. ချီးပဲ Phauk..မင်းသူငယ်ချင်းကစိတ်ညစ်နေတာနော် စိတ်မပူပါနဲ့ သူ့ကိုဂရုမစိုက်နဲ့ပေါ့ သူနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ် ငါ့ကိုယုံ တကယ်လား Tineeee ဒို့ Tine ကိုလာကြိုတာ လာ တက် မြန်မြန် သွားကြမယ်လေ
Tine... Tineစောင့်ပါဦး ငါမနက်ကဘယ်သူနဲ့​ေတွ့ခဲ့တယ်ထင်လဲ ဘယ်သူလဲ Green လား သူပဲပေါ့! ငါ့အဆောင်ထိလာကြိုတာ..တော်သေးတယ်ငါထွက်ပြေးလာလို့ နေဦး! မင်းကဘယ်လိုသိတာလဲ အခုပဲ မင်းဆီကိုလာနေပြီလေ Tine ...ဒါ blue Hawaii နော် ယူ့အကြိုက် ယူလေ သောက်ပါ ဒို့ကမလှပေမယ့် ဝိုက်လို့ကောင်းတယ်နော် ​ေကျးဇူးပါ ချစ်တယ်နော် Tine ဘာလိုချင်သေးလဲ ဒို့နှလုံးသားကိုလိုချင်လည်းရတယ်နော် ချီးပဲ! ငါ့အစား အီအီးပါပေးလို့ရရင်တောင်ပါမယ်ထင်တယ် ပြောသားပဲ သူကအတည်ပေါက်ကြီးပါဆို မင်းပဲပြောတော့ ငါသူ့ကိုအဖတ်မလုပ်ရင် သူနောက်ဆုတ်သွားမှာပါဆို အခုကြည့်ဦး Greenလက်ကလွတ်ဖို့ ငါ့ကိုကူညီပေးကြဦးလေ ငါသိပြီ ဒီလိုဆို သူနောက်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့....
Hardကစားရမယ် Hardball? Hardballဆိုတာ ဘောလုံးကန်သလိုပဲလား ငါ့အကြိုက် အတည်ပြောစမ်းပါ Baseballလိုပဲ ငါဆို အရမ်းကြိုက် Tine ဒို့ကိုတွေ့ဖို့ခေါ်တာဝမ်းသာပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီနေရာကြီးလား ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီနေရာကလှတယ်လေ ပြီးတော့အချိန်ကောင်းလေး ဘယ်နားကလှတာလဲ တခြားနေရာသွားရအောင် တခြားသွားကြမယ်နော် နေဦး ကြည့် Green လှပါတယ် လှတယ်နော် မင်းတို့ကောင်‌ေ‌တွစကားပြောသံကြားကြလား နားငြီးလိုက်တာ ဒီအချိန်ကြီး မင်းတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ ချစ်ပြနေရင်ငါကြည့်မရဘူးနော် မင်းတို့ဆေးရုံမရောက်ချင်ရင် လမ်းခွဲလိုက်ကြ ဘယ်တော့မှပြန်မတွဲနဲ့ Green.. အသားမနာခင် သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရအောင် လမ်းခွဲရုံပဲလေ ဟုတ်တယ် မြန်မြန် Tineခဏနေဦး သူတို့နဲ့ရှင်းလိုက်ဦးမယ်
သူ့ကိုယ်သူဟုတ်လှပြီထင်နေတယ် ချီး! Green လား John Wickလား ဒို့Boxing classနည်းနည်းတက်ထားတယ်လေ နည်းနည်းနောနောပဲ Tine အဆင်ပြေရဲ့လား နာသွားသေးလား ဒီခြင်တွေကတမျိုး ဟိုကောင်တွေပြန်လာမှာစိုးလို့ အဆောင်ပြန်ပို့ပေးမယ် Greenကစောင့်ရှောက်ပေးမယ် ဘယ်မှာမှမနာဘူးမလား ဒီလိုအနုအရွလေးကို Greenကစောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ ရောက်ပြီ ဒီညမင်းနဲ့တူတူနေစရာမလိုဘူးဆိုတာသေချာလား ရပါတယ် Greenပြန်ပါတော့ ပြန်ပါတော့ဗျာ ပြီးတာပဲ ဒါပေမဲ့ တခုခုဆိုပြောနော် 24/7 အသင့် ဒီနားတဝိုက်က hotel မှာပဲ check in ဝင်ထားလိုက်မယ် ဖုန်းဆက်နော် ဂရုလည်းစိုက် ဘိုင့် ဘိုင် အခြေအနေဘယ်လိုလဲ ချစ်သူငယ်ချင်းကြီး Tine မကောင်းဘူး ချစ်သူငယ်ချင်း Phuak အကုန်လုံးငါ့ကို Greenနဲ့နှစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ကြတယ် မထားခဲ့လို့မရဘူးလေ ငါ့လက်မောင်းတွေတောင်အပိုင်းပိုင်းကျိုးတော့မလို့ ဒီလိုဆိုငါတို့မဖြစ်တော့ဘူး အကူအညီလိုနေပြီ
အကူအညီ? လက်ဝေ့သမားလား ကာယဗလကြီးလား အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး မင်းကောင်မလေးအနေနဲ့ဟန်ဆောင်ပေးမယ့်လူလိုတာ ငါ့ကောင်မလေး? Greenကမင်းနောက်ကိုအရိပ်လိုလိုက်နေတာ မင်းတွဲနေတဲ့လူမရှိသေးလို့ မင်းနဲ့ဟန်ဆောင်တွဲမယ့်လူရှာ ဒါဆိုGreenလည်းနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ် အေးနော် ဒါဆိုဘယ်သူ့ရွေးရမလဲ ငါတို့ဌာနကအလန်းလေးတွေကလည်း တစ်ယောက်မှမလွတ်ကြဘူး မင်းအဆောင်ကတစ်ယောက်ကော မင်းရဲ့Line IDတောင်းတဲ့တစ်ယောက်လေ သူကsingle ဒါပေမယ့် မမိုက်ဘူး ငါ့ရဲ့ Chic Guyဂုဏ်သိက္ခာတော့အကျမခံဘူး ဟန်ဆောင်တွဲတာလေးကိုကွာ ဖြစ်နေလိုက်တာ မင်းကိုကူညီပေးချင်တဲ့ခပ်မိုက်မိုက်တစ်ယောက်ကိုသာရှာလိုက် ဒါပဲ လှလည်းလှပြီး singleဖြစ်တဲ့လူကိုသိတယ် ဒါပေမယ့်... Tineပဲ တို့ကိုဖျက်ခဲ့တာလေ အတည်ပြန်တွဲဖို့မဟုတ်ဘူးလေ ဒီတိုင်းဟန်ဆောင်တွဲပေးရုံပဲ လုပ်ပါ ကျောင်းလည်းတူတူပဲကို ကူညီလို့မရဘူးလား ကူညီပေးရင်ဘာရမှာလဲ
ဘာလိုချင်လဲ အကုန်ရမယ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ပဲပြောဦးမှာလား Armani.. Gucci.. Prada ပြောတဲ့ Brandတွေထဲက အိတ် အမယ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ အင်းပါ ငှားပေးမယ် ဝယ်ပေး ဝယ်ပေးရမယ်? ရပါတယ် ဒါဆို ကူညီမယ် တို့ကောင်လေးတော့မသိစေနဲ့ စိတ်ချပါ။ ဒါဆိုသောကြာနေ့ပွဲမှာတွေ့မယ် တစ်ယောက်က‌ေတာ့အသည်းကွဲတော့မယ် Tinee အကြာကြီးစောင့်လိုက်ရသေးလား တစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်နေတယ်မလား မကြာပါဘူး ပြီးတော့အထီးလည်းမကျန်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ Tineကတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်လို့ Tine ဘာပြောချင်တာလဲ သူက Noomnim တဲ့.. Tineကောင်မလေး ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တာ Green သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ် Greenနောက်ဆုတ်လိုက်ပါတော့ ရပါတယ် Tine.. နည်းနည်းမရက်စက်သွားဘူးလား ဟို... ဒီလိုလုပ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး
Greenကိုကျွန်တော့အတွက်နဲ့အချိန်တွေမဖြုန်းစေချင်လို့ပါ အဲ့ဒါကြောင့် သူများကောင်မလေးနဲ့ဟန်ဆောင်တွဲပြပြီး Greenကိုလိမ်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်။ Heyy!! ဘယ်လိုသိတာလဲ Noomnim က Green သူငယ်ချင်းရဲ့ကောင်မလေးလေ ကျောင်းမှာနေ့တိုင်းတွေ့နေကျ ကမ္ဘာကြီးကကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲ! သိပြီးသားဆို ဘာလို့ငိုတာလဲ နောက်ဆုတ်အောင်လိမ်လို့ ဝမ်းနည်းတာပေါ့ ဒါပေမယ့် Tineကလာချော့တယ်လေ Greenသဘောပေါက်ပါပြီ ဘာကိုသဘောပေါက်တာလဲ Greenရဲ့အချစ်ကိုစမ်းသပ်ချင်လို့ ဟုတ်တယ်မလား မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်ဘူးနော် လုံးဝမဟုတ်ဘူး ခုမှရှက်မနေပါနဲ့ အခု Tine ကိုပိုချစ်မိသွားပြီ လာ လျှောက်သွားရအောင် -မသွားဘူး -လာ သွားမယ်ဆို တာ့တာ Noomnim. အတန်းထဲရောက်မှတွေ့မယ် မြန်မြန်လာပါ Tine ရဲ့ စားစရာတွေစုံနေတာပဲ ပစ်လေ
ညံ့လိုက်တာ အိုးးး နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တာကို ဒီတလုံးတော့မလွဲစေရဘူး သေချာတယ် အဲ့လိုလုပ်တာမအောင်မြင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Plan B ရှိတယ် ဒီမှာ ဒီမှာ အိပ်ဆေး လစ်တာနဲ့ သူသောက်မယ့်အအေးထဲကိုအိပ်ဆေးထည့်ပြီး ပြေးလိုက်တော့ ကျန်တာ ငါတို့တာဝန် တကယ်ကြီးလား အေး Pရေ ဘောလုံး၃လုံးလောက်ထပ်ပေးပါဦး အစကနေပြန်စီပြီးမဆော့ချင်တော့ဘူး ဆက်ကစားမယ်နော် Greenရေဆာ‌ေနတယ်မလား အအေးသွားဝယ်ပေးမယ်နော် ရေဆာလို့လား ရူးသွားပြီလား အားပြည့်ဆူးမွေး မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး နတ်သမီးချဉ်ပေါင်အေး စူပါ ပါဝါ ဂန္ဓမာ ဆင်ပါဝါ black tea နှစ်ခွက်ပေးပါခင်ဗျ ဘယ်လောက်လဲ ဘတ် ၂၀ ကျေးဇူးပါ
ညာဘက်ကခွက် ညာခွက် ညာ ညာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဘာ‌ေတွအဲ့လောက်ကြာနေတာလဲ အအေးဝယ်ပေးနေတာလေ ဘာအအေးလဲ ဆင်ပါဝါ black tea အပြင်းစားပါလား အရမ်းကောင်းး ဘယ်လား ညာလား ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် တူတူပဲ မြန်မြန်လာ‌ေနာက်တစ်ဖွဲ့စတော့မယ် ဟုတ်တယ် မှန်တယ် ညဉ့်နက်တဲ့ထိ seriesတွေမကြည့်ခဲ့ရင်ကောင်းသား နေဦး ခုနက သမ်းနေတာ ညကserieတွေကြည့်လို့ပေါ့ ဟုတ်တယ်လေ တစ်ခုတစ်ခုပြီးဖို့ မိုးလင်းတယ် ဒါဆို.. ဒီခွက်က Tine Tine နေမကောင်းဘူးလား အဆောင်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးရမလား ရတယ် ရတယ် Sssss အဖွဲ့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြပါဦး မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့က Sssssဖြစ်ပါတယ် အိပ်တစ်ဝက်နိုးတစ်ဝက်ဖြစ်နေပေမယ့် ကျွန်တော်သိလိုက်တာက အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းပဲ
သီချင်းနာမည်က .. KooGan "အတူတူ" သူကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမသင့်တော်တော့ဘူး ဟို.. ဘာလိုချင်လို့လဲ